Showpad: Zvemukati Zvekutengesa, Kudzidziswa, Mutengi Engagement uye Kuyera | Martech Zone
Showpad: Zvemukati Zvekutengesa, Kudzidziswa, Mutengi Engagement uye Kuyera
Chipiri, May 12, 2020 China, Gumiguru 1, 2020 Douglas Karr
Sezvo bhizinesi rako parinoburitsa zvikwata zvekutengesa, iwe uchaona kuti kutsvaga kwezvakanaka zvemukati kunova chinhu chehusiku chinodiwa. Makambani ekuvandudza mabhizinesi anotsvaga mapepa machena, zvidzidzo zvemakesi, zvinyorwa zvemapakeji, zviongororwa zvebasa uye basa ... uye vanozvida zvakagadziriswa neindasitiri, kukura kwevatengi, uye saizi yemutengi.
Chii chinonzi Kugonesa Kugonesa?
Kugonesa Kugonesa ndiyo nzira yehurongwa yekushongedza masangano ekutengesa nematurusi akakodzera, zvemukati, neruzivo rwekutengesa zvinobudirira. Inopa masimba Vatengesi kudzosera zviitiko zvevatengi vemazuva ano vanotarisira kuzviita, otomatiki, uye hunyanzvi hwekuvandudza.
Neazvino COVID-19 kukiyiwa, zvikwata zvekutengesa zvakarasikirwa nemukana wekubatana pachedu netariro yavo panzvimbo kana nemisangano. Kutengesa kure kwakura mukufarira uye kugonesa kwekutengesa kure kwave kuri kunetsa. Saizvozvo, inopfuura hafu yemasangano ese akataura kuti kutengesa kure kwaive kwakaoma.
Iyo coronavirus inotyisa kwazvo pasirese, asi yakanyatsonaka pakutengesa kugoneswa… Vanhu vekutengesa vauinazvo vari kukumbirwa kutora nzvimbo yakawanda - ita zvakawanda uine zvishoma. Zvishandiso zvekutengesa zvekutengesa zvinotyaira kugona uye kugona.
Mary Shea, Muongorori weForrester
Iva nechokwadi chekutarisa Showpad's Remote Kutengesa Resource Hub. Showpad yakavaka iyo Hub kubatsira masangano akafanirwa kuchinjira kune yakasarudzika mhando. Iyo yemahara zvachose uye inosanganisira vhidhiyo akateedzana kubva Kuhwina Nekugadzira, blog zvinyorwa pamusoro pekutengesa, kudzidzisa, kukwidza board, pamwe nemazano kubva kune nyanzvi dzeShowpad.
Showpad ine yakakwana yekutengesa inogonesa chikuva iyo inosanganisira ese mativi erwendo rwekutengesa ayo anodiwa:
Zvemukati maraibhurari ayo ari nyore kutsvaga
Mutengi zvemukati izvo zviri kuita uye zvakasarudzika
Maonero ekutengesa ekutarisa zvirimo uye nekuita kwechikwata
Kubatanidzwa kuita otomatiki maitiro ekutengesa uye Push data muCRM kana contract module.
MaSales Enablement Mapuratifomu anogonesa makambani kuisa inoenderera mberi yekutengesa kudzidza uye kusimudzira, kuwedzera kushanda kweiyo nzira yekutengesa, kugonesa vatengesi kukudziridza hukama huri nani nevatengi, uye kuenzanisa kutengesa uye kushambadzira kwekuedza.
Showpad Yemukati Management
Showpad inogonesa masangano ane imwe nzvimbo yepakati iyo inoita kuti vatengesi vawane, vape uye vagovane zvazvino, pa-mhando zvemukati mune zvinoonekwa zvekuita zviitiko. Showpad's zvemukati manejimendi manejimendi manejimendi yako zvemukati zvinobudirira, uye nekukurumidza zivisa zvikwata zvako nezve chero zvigadziriso - zvichiita izvo zvirimo zvirinyore kuwana kuvanhu vakanaka panguva yakakodzera. Showpad inogona kusangana neCMS yako iripo kana DAM kupinza kana kuwiriranisa raibhurari yako yese yefaira.
Nunura pabhodhi, kurovedza, uye kudzidzisa vatengesi vako vanofanirwa kuve vanopa mazano vapiwe uye kupfuudza huwandu neShowpad Coach yekutengesa kochi uye software yekudzidzisa. Na Showpad Kochi, unogona:
chitima - Nunura uchiita pabhodhi uye kudzidziswa kubatsira vamiriri vako vekutengesa kubudirira.
Ongorora - Wongorora kuchengetedza kwechikwata chako kuti uone uye nekugadzirisa nzvimbo dzisina kusimba.
Dzidzira - Vaka chivimbo kuburikidza nemitambo yakanyorwa, mitambo-yekutamba uye kuongorora kwevezera rako
Coach - Ziva zvakapfuma analytics & zvinyorwa kuitira kuti mamaneja agone kudzidzisa zvakanyanya
Showpad Kochi inonzwisisika nyowani Mutungamiri Hub inogadzirisa kutengesa kudzidzisa uye kudzidzisa kwemunda uye mukati mekutengesa reps, vachiri kusiya nguva yekuti mamaneja aite mabasa avo ezuva.
Natsiridza kutengesa uye kushambadzira kushanda uye kupa mafuta ekurudzira nekunzwisisa kuti vatengesi uye tarisiro vanobatana sei nezvako zvemukati uye kudzidziswa Zvimiro zvinosanganisira:
Zvemukati analytics zvekushambadzira - Chengetedza zvakawanda mune zvemukati zvinokanganisa mari.
Prospect nzwisiso yekutengesa - Pfupisa yako yekutengesa kutenderera nekutevera yako yemutengi nhanho yekufarira.
Mushandisi analytics yehutungamiriri hwekutengesa - Dzokorora maitiro evatengesi vako vepamusoro kuyera kubudirira
chakagadzirwa njere - Tengesa zvine hungwaru uye ununure zvakasangana nezvakajairwa nehuwandu husingaenzaniswi uye dzakasiyana data.
Natsiridza kushambadzira kugona nekumisikidza zvemukati manejimendi ne Showpad's asset manejimendi kubatanidzwa, kana kuvaka mapurogiramu ane simba uye maitiro ekuongorora uchishandisa Showpad's robust API uye SDK. Kubatanidzwa, Kusanganisira:
gutsikana - synchronize ne Outreach kana Salesloft
Customer Relationship Management - kusanganisira Salesforce, Microsoft Dynamics, kana SAP.
Email Kubatanidzwa - Outlook uye G Suite.
Marketing Automation - kusanganisira Marketo.
mharidzo - gadzirisa Google Slides kana Microsoft PowerPoint mukati meShowpad
Kugovera Screen - isina musono Zoom uye Google Calendar kusangana.
Social - Goverana zvakananga kuTwitter, LinkedIn, uye WhatsApp, kana kuteedzera chinongedzo kune chero imwe nzvimbo yekudyidzana uchishandisa Showpad's yekuwedzera paGoogle Chrome.
Showpad zvakare ine ese anodiwa maAPIs uye SDK yekubatanidza zvizere chikuva mune chero chikuva.
Kumbira Showpad Demo
Tags: aimutengi kubatanidzwagoogle suitegsuitemarketoMicrosoft Dynamicsmicrosoft outlookoutreachkutengesa analyticskuongorora kwekutengesakutengesa kudzidzisazvekutengesa zvemukatiKugonesa Kugonesamaonero ekutengesachiyero chekutengesamutengesi performanctsika yekutengesamharidzo dzekutengesakutengesa kudzidzisasapshowpad
Kurudzira yako iTunes Podcast ine Smart App Banner